विहेपछि चलचित्रलाई माया मारेर बिदेसीएका ५ नेपाली नायिका – NepalajaMedia
March 4, 2021 401
नेपाली सिनेमा क्षेत्रमा नयाँ नायिकाहरुको आगमन भएसंगै पुराना नायिकाहरु पलायन हुने क्रम चलिरहन्छ । कुनै बेला निकै चलेका दर्शकको मन मष्तिस्कमा बस्न सफल प्राय जसो नायिकाहरुले विवाह गरिसकेका छन् ।
विवाहपछि पनि कति नायिका सिनेमा अझ सक्रिय छन् त कति आफ्नो श्रीमानसंग विदेश पलायन भइसेका छन् । ग्ल्यामर सिने नगरीमा विवाहपछि सक्रिय भएका नायिकाहरु निकै कम छन् । जुन हातमा गन्न सकिन्छ । हामीले केहि नायिकाहरूलाइ प्रस्तुत गरेका छाैँ ।
कुनै समयकी व्यस्त तथा चर्चित नायिका हुन विपना थापा । उनले जन्मभूमि, अप्सरा, नाता रगतको, आगोे, तँ त साह्रै बिग्रिस नी बद्रि, मामा भान्जा, मीतिनी, शहिद गेट लगायत दर्जनौँ सिनेमामा काम गरिसकेकी छिन् ।थापाले भारतीय नागरिक आँशुतोष भारद्धाजसंग विवाह गरेकी थिइन् । विवाह गरेसंगै उनी भारत गएकी हुन् । हाल थापा भारतको मथुरामा बस्छिन् । विपनाका श्रीमान् व्यवसायी हुन् । विपनाले सिनेमा खेल्न छोडेको धेरै बर्ष भइसक्यो । उनी गृहिणी जिवन रमाइरहेकी छिन् ।
त्यस्तै नायिका जल शाह पनि निकै चर्चित नायिका हुन् उनि पनि हाल अमेरिकामा बस्छिन् त्यस्तै नायिका गरिमा पन्तले बिवाह गरेर बिदेह पलायन भएकी छन्। उनले बेल्जियममा बस्ने ब्यवसायीसँग बिवाहा गरेर उतै बसिरहेकी छन् । उनले समय समयमा सुन्दर तस्बिर सामाजिक संजालमा शेयर गरिरहन्छिन् ।
त्यस्तै नायिका झरना बज्रचार्यले पनि मलेसियन ब्यापारी राहुल अग्रवालसँग बिवाह गरेर कहिले यता कहिले उता गरर समय बिताइरहेकी छिन् । अरूणीमा लम्साल पनि बिवाहपछि बिदेशमा रमाएर बसेकी छन् ।
Prevकक्षाबाट नि’कालेर फि’ल्डमा घि’सार्दै विद्यार्थीलाई नि’र्म’म कु’टपि’ट
Nextखेत खन्दा माटोको भाँडो भेटियो खोलेर हेर्द सबै चकित !
तपाइले सोचेको काम बन्नेछ, ॐ लेखि सेयर गरौं ….
प्याजले यसरी बढाउन्छ घण्टौसम्म यौ’न आनन्द, कसरी प्रयोग गर्ने ? (14400)